Showing posts with the label अन्तर्वार्ता
मधेस केन्द्रित दलमा पहाडी अनुहारका नेता जरी लामाको उद्घोष, आगामी चुनावमा जसपाले ठोरीमा सरकार बनाउँछ
वीरगंजबाट ६५ किलोमिटर पश्चिममा रहेको अति नै सुन्दर र प्रकृतिको काखमा बसेको ठोरी गाउँँपालिका। यो पर्सा जिल्लाको प्रमुख पर्यटकीय स्थल हो। इतिहास र प्राकृतिक सौन्दर्यले गर्दा पर्सा जिल्लामा मात्र नभई नेपालमैं ठोरीले आफ्नो छुट्टै पहिचान बनाएको छ। ठोरीले धेरै प्रतिभालाई पनि जन्म दिएको छ। राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरका खेलाडी, पत्रकार, कलाकार जन्माइसकेको छ। तर राजनीतिकरूपमा भने राष्ट्रिस्तरमा दखल राख्ने नेताको अभाव छ। तर मुलुकका अधिकांश ठूला पार्टीमा यहाँका अगुवाहरूको जबरजस्त प्रभाव छ। यसैबीच, आगामी डेढ वर्षपछि मुलुकमा स्थानीय, प्रदेश र सङ्घीय चुनाव हुँदैछ। ठोरीको सुवर्णपुरका पूर्व गाविस अध्यक्ष जरी लामा पहाडी अनुहारका आदिवासी नेता हुन्। उनी मधेस केन्द्रित दल राजपाबाट गत चुनाव लडेका थिए। आउँदो चुनावमा उनको पार्टीको योजना के छ, यसै सेरोफेरोमा प्रतीककर्मी राधेश्याम पटेलले गरेको कुराकानी। – तपाईंको राजनीतिक यात्रा कहिंलेबाट शुरू भयो ? + मैले आफ्नो राजनीतिक यात्रा २०४६ सालमा काङ्गेसबाट शुरू गरें र त्यो बेलादेखि आफ्नो गाउँसमाजमा निरन्तर सामाजिक कार्यमा जुटिरहें। फलस्वरूप तत्
राजनीतिलाई थाती राखिएन भने वीरगंज डुब्छ
राधेश्याम पटेल, वीरगंज/ डा. उदयनारायण सिंह नारायणी गण्डक अस्थायी कोभिड अस्पतालका संयोजक हुन्। उनी विगत चार महीनादेखि कोभिड सङ्क्रमितहरूको उपचारमा संलग्न छन्। पछिल्लो १३ दिनमा वीरगंजको अवस्था भयावह बन्दा यसमा निकै लापरवाही भएको उनको गुनासो छ। जुन बेला व्यवस्थापन मिलाउनुपर्ने थियो, त्यस बेला तीन तहका सरकार तथा सरोकारवालाहरूले तदारूकताका साथ काम नगर्दा कोरोना तेस्रो चरणमा प्रवेश गरी चौथो चरणमा पनि पुग्न लागेको उनले बताएका छन्। उनका अनुसार सोमवारसम्म पर्सामा २६२ जना सङ्क्रमित भेटिएकोमा साउन १ गतेदेखि १०५ जना सङ्क्रमित थपिएको छ। जसमध्ये पाँचजनाको मृत्यु भइसकेको छ। तीनजना आरडिटीमा पोजेटिभ देखिएका शङ्कास्पद बिरामी पनि गण्डक अस्पतालमा उपचार सेवा लिइरहेका छन्। १२ दिनमा वीरगंजमा पाँचजनाको कोरोना सङ्क्रमणबाट मृत्यु भएको देखिन्छ भने अझै १०० जनामा सङ्क्रमण छ। जसमध्ये ५८ जना गण्डक अस्पतालमा र ४२ जना आइसोलेशन वार्डको सुविधा नहुँदा घरमैं अलपत्र परेका छन्। शुरूमा चैतदेखि असारसम्म एक चरणको तीतो अनुभव सँगालेको अवस्थामा उनले यहाँका राजनीतिक दलका अगुवाहरूसँग पूर्वाग्रहपूर्ण राजनीति नगरी जनताको र
मृत्युदर शून्य रहेको अवस्थामा उद्योग व्यापार खोल्न सुझाव
प्रस, परवानीपुर, १४ वैशाख/ नेपालमा ३३ दिनको लकडाउनपछि अर्थतन्त्र धराशयी बन्दै गएपछि वीरगंजका उद्योगी–व्यवसायीहरूले उद्योग–व्यापारलाई जीवन्त राख्न उद्योग, कलकारखाना सञ्चालनमा ल्याउन सरकारलाई सुझाव दिएका छन् । मुलुककै प्रमुख औद्योगिक कोरिडोर वीरगंजका उद्योगीहरूले लकडाउनको मोडालिटी परिवर्तन गरी नेपालका उद्योग–व्यापार पूर्णरूपमा सञ्चालनमा ल्याउन माग गरेका हुन्। वीरगंज उद्योग वाणिज्य सङ्घका वरिष्ठ उपाध्यक्ष सुबोध गुप्ताका अनुसार विश्वका अन्य देशका तुलनामा नेपालमा कोरोना सङ्क्रमणको मृत्युदर शून्य र सङ्क्रमित दर निकै न्यून रहेकाले सरकारले लकडाउनको मोडालिटी परिवर्तन नगरे अर्थतन्त्र धराशयी बनेर सबै क्षेत्रमा नकारात्मक प्रभाव पर्नेछ। “विश्वको तथ्याङ्क र लकडाउन अभ्यासलाई हेर्ने हो भने न्यूनतम ५० दिनभन्दा बढी समय लाग्ने विश्लेषण छ,” उनले भने, “नेपालमा लकडाउन अवधिले ३३ दिन पूरा गरिसकेको छ, अब सरकारले हालको कोरोना सङ्क्रमण अवस्थाको विश्लेषण गरी अर्थतन्त्रलाई पहिलेको अवस्थामा सुस्त गतिमा भएपनि नयाँ रणनीति बनाइ अघि बढाउनुपर्छ।” उच्च सतर्कता अँगालेर यदि उद्योग र व्यापार सञ्चालन गरिय
उपयुक्त उपचार र पवित्र हेरचाहमा आस्था छ–डा. चतुर्वेदी
डा. अभिषेक अहिले युवा न्युरो सर्जनमा नयाँ नाम हो । उनले यस विधामा लामो अध्ययन र विशेषज्ञता हासिल गरेका छन् । विशेष विज्ञताप्राप्त व्यक्तिहरू नेपाल छाडेर विदेश पलायन भइरहेको नेपाली परिप्रेक्ष्यमा डा अभिषेक भने अमेरिकाबाट नेपाल फर्केका छन् । उनी आप्mनै देशमा बसेर आप्mनो देशवासीको सेवा गर्न उत्सुक छन् । उनको परिवारसँग घनिष्ठताको नाताले उनको यस निर्णयले मलाई आकर्षित गरेको हुँदा उनीसँग टेलिफोन वार्ता गर्दै उनका विचारहरू प्रस्तुत गरेको छु– ० डा. अभिषेक, तिम्रो अध्ययनको विषय, तिमी को हौ र किन विदेशको प्रचुर अवसर छाडेर नेपाल आयौ, बताइदेऊ ं– म डा अभिषेक, वीरगंज मनपा– निवासी रामाज्ञा चतुर्वेदीको पुत्र हुँ । मैले अल इन्डिया इन्सिटच्युट अफ मेडिकल साइन्स, नयाँ दिल्लीबाट एबिबिएस गरें । संयुक्त राज्य अमेरिकामा जेनरल सर्जरीमा स्नातकोत्तर तालीम लिएको छु, बङ्गलादेशको बिएसएमएमयुबाट न्युरोसर्जरीमा एमएस गरेर अमेरिकामा एक वर्षे क्लिनिकल न्युरोसर्जरी फेलोशिप हासिल गरेको छु । अमेरिकाबाट दुई वर्षे मेरुदण्ड र नसासम्बन्धी फेलोशिप प्राप्त गरेको छु । म २०१८ को मध्यमा आप्mनो देशवासीको सेवा गर्
डिपिएसका प्रिन्सिपलसँग ११ प्रश्न के अब वीरगंजको शिक्षा क्षेत्रको विकृति कम हुन्छ ?
वीरगंज क्षेत्रकै भौतिक सुविधायुक्त तथा प्रभावकारी शिक्षण सिकाइ गराउने स्कूलको रूपमा दिल्ली पब्लिक स्कूल वीरगंज (डिपिएस) चिनिन्छ। बाराको परवानीपुर गाउँपालिकाको चैनपुरमा अवस्थित यस विद्यालयले नेपाल सरकारको माध्यमिक शिक्षा परीक्षा (एसइई) अन्तर्गत कक्षा १० र भारतको केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (सिबिएसई) को कक्षा १२ सम्म अध्यापन गराउने गर्दछ। हालको अवस्थाबाट अब डिपिएसको लक्ष्य के छ, वीरगंजका निजी विद्यालयमा देखिएको विकृतिबारे विद्यालयका प्रिन्सिपल डा. गौरीशङ्कर चौधरी (डा.जिएस चौधरी)सँग प्रतीककर्मी राधेश्याम पटेलले ११ प्रश्नका साथ गरेको कुराकानी ः– १. तपाईं २०७३ सालदेखि डिपिएसको प्रिन्सिपल हुनुहुन्छ, कतिको सन्तुष्ट हुनुहुन्छ, आप्mनो जिम्मेवारीबाट ? – राम्रै छ, मभन्दा विद्यार्थी र अभिभावकबाट मेरो कार्यशैलीबारे सोध्नुभयो भने उपयुक्त होला, म एउटा मात्र कुरा भन्न चाहन्छु, यस विद्यालयले विद्यार्थीहरूको पाँचै पक्ष ः शैक्षणिक, सामाजिक, संवेगात्मक, आध्यात्मिक र शारीरिक विकास गर्दै गुणस्तरीय शिक्षा, अनुशासन, अतिरिक्त क्रियाकलाप र मानवीय मूल्य मान्यतामा जोड दिंदै अगाडि बढिरहेको छ, लक्ष्
पेशागत हकहित र शैक्षिक गुनस्तर हाम्रो कार्यदिशा हो
– तीर्थराज यादव, अध्यक्ष शिक्षक महासङ्घ पर्सा शिक्षकहरूको छाता सङ्गठन शिक्षक महासङ्घ पर्साका अध्यक्ष तीर्थराज यादव हुन्। बितेको पुस १५ गते सम्पन्न महासङ्घको चुनावमा उनको नेतृत्वको शिक्षक सङ्घले अन्य सङ्घसङ्गठनभन्दा बढी मत प्राप्त गरेपछि सङ्घले यादवलाई महासङ्घ अध्यक्षको जिम्मेवारी सुम्पेको हो। चुनावमा नेपाली यादव नेतृत्वको नेपाली कांग्रेस निकट नेपाल शिक्षक सङ्घले ८६६ मत प्राप्त गरेको थियो। नेकपा निकट नेपाल शिक्षक सङ्गठनले ७२६ मत र मधेस केन्द्रित दल निकट सङ्घीय शिक्षक फोरमले ५१५ मत प्राप्त गरेको थियो । पर्सामा शिक्षकहरूको छाता सङ्गठनको चुनाव २६ वर्षपछि भएको हो। यस अघि ०४९ सालमा चुनाव भएको थियो । त्यस अन्तरालमा आपसी भागबन्डामा सहमति हुँदै आएको थियो। ३ वर्षे कार्यकालका लागि शिक्षक महासङ्घ पर्साका नवनिर्वाचित अध्यक्ष यादवसँग प्रतीक दैनिकका सम्पादक प्रताप श्रेष्ठले गरेको सम्पादित कुराकानी। – परिवर्तित अवस्थमा महासङ्घको अधिकार तथा कार्यक्षेत्र पहिलेको भन्दा थपघट के पाउनु भयो ? + शिक्षक महासङ्घमा जिल्लाको अधिकार विगतको निकै सङ्कुचित भएको छ। जिल्ला शिक्षा कार्या
पाँच वर्षभित्र पर्यटन र कृषि क्षेत्रमा क्रान्ति नै आउँछ
प्रदेश–२ अन्तर्गत पर्सा जिल्लाको सुदूरपश्चिममा रहेको ठोरी गाउँपालिका पर्यटकीय, धार्मिक, सांस्कृतिक, ऐतिहासिकरूपमा महŒवपूर्ण मानिन्छ । प्रचारप्रसारको अभावमा ओझेलमा परेका यहFँका महŒवपूर्ण स्थलहरूको एकपटक भिजिट गरेपछि मन छुने खालका मनमोहक दृश्यहरू मानसपटलमा घुमिरहन्छ । वरपर पहाडले घेरिएको तराईको ‘मिनी उपत्यका’को रूपमा चिनिने ठोरी यसै गाउँपालिका अन्तर्गत पर्दछ । छिमेकी मुलुक भारतसँग सिमाना जोडिएका पर्वतशृङ्खला सFसारी डाँडा, चितवन तथा पर्सा राष्ट्रिय निकुञ्जले घेरिएको कारण पनि यस क्षेत्रको बेग्लै महŒव छ । ऐतिहासिकरूपले पनि यो क्षेत्र महŒवपूर्ण छ । तानाशाही राणा शासनको अन्त्य गरी प्रजातन्त्र ल्याउन सङ्घर्ष गर्ने योद्धाहरूले समेत यस क्षेत्रको प्रयोग गरेका थिए । देशको सबै क्षेत्रमा सडक तथा यातायात नपुगेको समयमा ठोरीबाटै नुन लगेर खाने गरेकाले पनि यो ठाउँ नुन थलोको रूपमा प्रख्यात छ । यस ठाउँको प्रचारप्रसार र सरकारले चासो देखाउने हो भने पर्यटन क्षेत्रको विकास तथा देशको अर्थतन्त्रलाई मजबुत पार्न यसको भूमिका अग्रणी रहने देखिन्छ । पर्यटकीय नगरीको रूपमा विकास गर्नका लागि स्थानीय सरकारले कस्तो
समृद्धि र सामाजिक न्यायका चाहना पूरा गर्न प्रतिबद्ध छौं
जीतपुरसिमरा उपमहानगरपालिकाका नगर प्रमुख (मेयर) डा. कृष्ण पौडेल व्यस्त कार्यसूचीसहितको दिनचर्यामा छन् । विभिन्न सामाजिक सङ्घसंस्थाको नेतृत्वमा रहँदै आएका उनी यसै पनि व्यस्त हुने गर्थे, मेयर बन्नु अघि । नेकपा (एमाले) को राजनीति, सहकारी अभियान, सामाजिक क्रियाकलाप र लेखापरीक्षण पेशागत जिम्मेवारीमा रहेका डा. पौडेलको अहिले भने कार्यसूची फेरिएको छ । उनी यतिखेर जीतपुरसिमरा उपमहानगरपालिकाको विकास निर्माण, समृद्धि र सामाजिक न्यायको अभियानमा जुटेका छन् । बौद्धिक र लोकप्रिय छवि बनाएका डा. पौडेलले प्रदेश नं. २ मा पार्टीको कमजोर उपस्थितिवीच एक महानगर र तीन उपमहानगरमध्ये एक मात्र उपमहानगरमा एमालेको तर्फबाट जितेर आपूmलाई चर्चाको पात्रको रूपमा उभ्याएका छन् । उम्मेदवारी, चुनावीप्रचार शैली र प्रतिकूलतावीच चुनाव जितेर काम शुरु गरेका मेयर डा. पौडेलको चर्चाको ग्राफ बढदो छ । मेयर डा. पौडेलले सबै राजनीतिक दलसँग समन्वय गरेर काम अघि बढाइरहेका छन् । समृद्धिका लागि एक भएर अघि बढौं भन्ने उनको भावनासँग सबै सहमत छन् । चाडपर्वहरूको शृङ्खला र कर्मचारी अभावबीच उनले आपूm निर्वाचित भएको डेढ महिना, कार्यारम्भ भएको
सय दिनका मेयरसँग भलाकुसारी
तलब पनि लिन्छु, भत्ता पनि लिन्छु, व्यक्तिगत उपयोगमा ल्याउँदिनँ पुस २८ गते बिहान ६–६ः३० बजे वीरगंजका मेयर विजय सरावगीसँग भेटने निश्चित भएको थियो । शीतलहर र कुहिरोले गर्दा मर्निङवाक गर्दैगर्दा भेटन विलम्ब होला भनेर एउटा कलम र कंगारु–पेट भएको ज्याकेटमा सानो डायरी राखेर म निस्केको थिएँ । म सवा ६ बजे पुग्दा एउटा चियाले स्वागत हुँदा नहुँदै मेयर विजय सरावगी कुराकानी गर्न आइपुगे । साँच्चै भन्ने हो भने सबै ठाउँका नगरपालिका, उपमहानगरपालिकाको समाचार आइरहँदा वीरगंजको भने रहारुन्न नै थियो । सो कौतुहल मेटन र गैरराजनीतिक क्ष्Fेत्रबाट वीरगंज महानगरपालिको अभिभारा बोक्न आएका मेयरसँग कुराकानी गर्ने र जिज्ञासासमेत मेटने तलतल लागिरहेको थियो । स्थानीय तहको निर्वाचन भएको सय दिन पनि नाघिसकेको हुनाले मैले पहिलो प्रश्न नै अफशोचजनक स्वरमा गरेको थिएँ– –१०० दिन बितेको हेक्का रहेको भए म एक हप्ता पहिले तपाईसँग समय लिने थिएँ । समय त भिडकिसक्यो... मेयर–होइन जानेर वा नजानेर तपाई १०० दिन पुगेकै दिन आउनुभएको छ । शपथ ग्रहणपछि केही अशक्त कारणले मैले असोज १७ गते मात्र अफिस ज्वाइन गरेको थिएँ । मेरो व्यावहारिक का
करोड तिरेर टिकट ल्याउनेहरूले जनताको लागि केही गर्दैनन्
राजन पौडेल, माओवादी केन्द्रका केन्द्रीय सदस्य हुन्। लामो समयदेखि राजनीतिमा सक्रिय पौडेललाई अहिले माओवादी केन्द्रले जीतपुरसिमरा उपमहानगरपालिकाको मेयरमा उम्मेदवार बनाएको छ। माओवादी युद्धको बेला जेलजीवनसमेत बिताएका पौडेल करिब १ महिनादेखि घरदैलोमा सक्रिय छन्। सरल स्वभावका पौडेलले प्रतीकसँग गरेका कुराकानीको अंश। – तपाईं घरदैलोमा हुनुहुन्छ, जनताको समर्थन पाउनुभयो ? + जनता स्थानीय तहको निर्वाचनमा आप्mना उम्मेदवार छान्न आतुर छन् । विकासका निम्ति जनता व्याकुल छन्। गाउँबस्तीभरि जनताको पहिलो प्राथमिकतामा विकास छ। बाटोघाटो, पुलपुलेसा, बिजुलीपानी जनताका निम्ति निकै आवश्यक छन्। जनताले यसबाहेक अरू केही आशा गरेका छैनन्। बेरोजगार भएका कारण जनतालाई हातमुख जोड्नसमेत धौधौ छ। बिहान बेलुकीको छाक टार्न, बिरामी पर्दा उपचार जनताका प्राथमिक समस्या हुन्। यसको लागि अब निर्वाचित हुने मेयरले धेरै कुरा गर्न सक्छन्। यही काम गर्न सक्ने स्वच्छ छवि भएका नेता जनताको रोजाइँमा पर्छन् । जनताका कुरालाई मैले गम्भीरतापूर्वक लिएको छु, सुनेको छु। र, त्यसलाई सम्बोधन गर्ने आँट अरूसँग भन्दा मसँग बढी छ। अरू त टिकटकै
हतारमा घोषणा भएको चुनावमा हिंसाको सम्भावना
– अहिलेको चुनावी माहोललाई कुन रूपमा लिनुभएको छ ? + पर्सा जिल्लामा बसेर आगामी निर्वाचनलाई नियालेर हेर्दा बडो द्विविधात्मक अवस्था रहेको पाएको छु। चार हप्ता चुनावको समय बाँकी रहँदा चुनावको लागि उचित वातावरण बन्न नसकेको देखेको छु । – के चुनाव तोकिएकै समयमा होला त ? + केही भन्न नसकिने अवस्था छ, एकातिर सरकार चुनावको तयारीको सिलसिलामा मतपत्र छाप्ने, मतपेटिका एवं कर्मचारी खटाउने तर्फ केन्द्रित छ भने अर्कोतर्फ मधेसी मोर्चा सरकारसँग दाबी गरेको माग पूरा नभएकोमा बिच्केर आन्दोलनको कार्यक्रम जारी गरेको अवस्था छ। अवस्था ५०/५० छ जस्तो लाग्छ। – चुनाव घोषणा गर्नुभन्दा पहिले सरकारले पूर्व तयारीका लागि गर्नुपर्ने कार्य गरेको छ त ? + निश्चितरूपले चुनाव भनेको बढीभन्दा बढी जनताको अभिमत प्राप्त गर्ने कार्यक्रम हो, यसमा सरकारले हतार गरेकोजस्तो देखिन्छ । भर्खरै सरकारले स्थानीय तहको घोषणा गरेको छ, कतिपय कर्मचारी गाउँपालिका जान पाएका छैनन्। जनतालाई चुनावबारे खासै जानकारी छैन। कुन ठाउँको लागि कस्तो मेकानिज्ममा चुनाव हुन्छ, कतिजना उठछन्, कतिजनालाई मतदान गर्ने हो, कसरी मतदान गर्ने हो यी
शीतल महतो र उनको पत्रकारिता
राससकर्मी शीतल महतो वीरगंजको शीतल, शालीन र इमानदार पत्रकारको रूपमा चिनिन्छन् ।पत्रकार महतोको हालै राष्टिूय समाचार समिति अञ्चल कार्यालय वीरगंजबाट केन्द्रीय कार्यालय काठमाडौंमा ९ औं तहमा कार्यकारी सम्पादक पदमा बढुवा भएको छ । उनी काठमाडौं जाने तयारीमा छन् ।वीरगंजको व्यावसायिक पत्रकारिताको लागि इमानदारीका साथ विविध क्षेत्रको विकासको लागि उनले खर्चेको समय र श्रमलाई कदर गर्दै विभिन्न सङ्घसंस्थाले उनको सम्मान गर्दै छन् । आखिर महतो वीरगंज आए कसरी, उनी कहाँका बासिन्दा हुन्, उनले कति अध्ययन गरेकाछन्, उनको परिवार कस्तो छ, अब पत्रकारितामा के गर्छन्, वीरगंजको पत्रकारिता आगामी दिनमा कस्तो हुनुपर्छ भन्ने विषयमा उनीसँग गरिएको कुराकानी । – दाइ नमस्कार । ० नमस्कार भाइ । –कतिको व्यस्त हुनुहुन्छ ? ० ठीकठीकै छु, वीरगंजबाट भौतिक रूपमा केही टाढा जाँदैछु, सबैले सम्मान गरिरहेका छन्, खुशी पनि छु ,दु:खी पनि । – वीरगंजलाई धेरै माया गर्नुहुन्छ क्या हो ? ० अवश्य, वीरगंज लामो समयसम्म मेरो कर्मथलो भयो, जीवनभर यो शहरको ऋणी बनेको छु । – तपाईंको जन्म, बाल्यकाल र शिक्षादीक्षाबारे बताउनुहोस्
वीरगंजमा अभिभावकको पहिलो रोजाइ बन्छौं– प्रिन्सिपल चौधरी
विगत ११ वर्षदेखि वीरगंज क्षेत्रको शिक्षाको इतिहासमा उल्लेखनीय योगदान पुर्‍याउँदै आएको दिल्ली पब्लिक स्कूलले यस शैक्षिक सत्रमा पनि नयाँ सोचका साथै नयाँ प्रिन्सिपललाई स्वागत गरेको छ। यसै शैक्षिक सत्रदेखि डा. जि एस (गौरीशङकर )चौधरी प्रिन्सिपल भएर आउनुभएको छ। विद्यालय र क्याम्पस तहको ३० वर्षे अध्ययन अध्यापनको अनुभव सँगाल्नुभएका चौधरीले अङ्ग्रेजी विषयमा विद्यावारिधि गर्नुभएको छ। त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा १८ वर्ष र काठमाडौंका विभिन्न स्कूलमा करिब १२ वर्ष अध्यापन गराउनुको साथै प्रिन्सिपलको कार्यभार सम्हाल्नुभएका डा. चौधरीको आगमनसँगै डिपिएस वीरगंजको ऊर्जा थपिएको छ। देश–विदेशको शिक्षा प्रणालीको जानकारी राख्ने चौधरीले डिपिएसलाई अब यहाँका अभिभावकहरूको पहिलो रोजाइ बनाउन भरमग्दुर प्रयास गर्ने अठोट लिएका छन्। साथै डिपिएसमा बर्सेनि नयाँ प्रिन्सिपल फेरिने सिलसिला रोक्ने उनको कार्ययोजना छ। – नमस्कार तपाईंको परिचय ? + मेरो नाम डा. जि एस चौधरी (गौरीशङकर चौधरी)। हाल म दिल्ली पब्लिक स्कूल, वीरगंजमा प्रिन्सिपलको रूपमा कार्यरत छु। – डिपिएससँग कसरी जोडिनुभयो ? + डिपिएस वीरगंजमा प्रिन्सिपलको आवश
डिपिएसमा नयाँ प्रिन्सिपलको आगमन र भावी कार्ययोजना
विगत १० वर्षदेखि बारा, पर्साको शिक्षाको इतिहासमा उल्लेखनीय योगदान गर्दै आएको दिल्ली पब्लिक स्कूल वीरगंजमा अहिले नयाँ प्रिन्सिपलको आगमन भएको छ । उहाँको भावी कार्ययोजनाको सन्दर्भमा प्रतीकले गरेको कुराकानीको सारसङ्क्षेप: विगत १० वर्षदेखि बारा, पर्साको शिक्षा क्षेत्रको इतिहासमा उल्लेखनीय योगदान पुर्‍याउँदै आएको दिल्ली पब्लिक स्कूल वीरगंजमा अहिले नयाँ प्रिन्सिपलको आगमन भएको छ । सो स्कूलमा यसै शैक्षिक सत्रदेखि मनीषकुमार कर्ण प्रिन्सिपल भएर आएका छन् । विद्यालय शिक्षा प्रणालीको समस्या र समाधानको विषयमा भारत, सिंगापुर एवं संयुक्त राज्य अमेरिकामा लामो समय बसेर स्कूल व्यवस्थापनबारे अध्ययन–अनुसन्धान पूरा गरेका छन् । नेपालको शिक्षाको विकासमा भूमिका निर्वाह गर्न उनी नेपाल फर्केको केही वर्षमैं आफ्नो क्षमताको कारण डिपिएसमा आबद्ध भएका छन् । बहुमुखी प्रतिभाका धनी एवं असल प्रिन्सिपलको रूपमा परिचित कर्णको आगमनले सम्पूर्ण विद्यालय, कर्मचारी, शिक्षक, विद्यार्थी एवं अभिभावकहरूमा थप उत्साह र अपेक्षा जन्मेको छ । स्कूल म्यानेजमेन्टमा स्नातकोत्तर तहसम्मको शिक्षा हासिल गरी २५ वर्ष शिक्षामा बिताएको